Ny famoahana andiany KQA dia namboarina ary natao mifanaraka amin'ny API610 th10 (Pompy Centrifugal ho an'ny solika, simika ary gazy voajanahary). Azo ampiasaina ho an'ny asa asa ratsy izany toy ny mari-pana avo, ny hafanana ambany ary ny fanerena avo.
Ny pump pump process dia ampiasaina amin'ny famolavolana solika, indostrian'ny solika ary ny indostria hafa izay mila mitondra solika. Ny voatavo dia mifanaraka amin'ny fanitsiana API610. Ny fitrandrahana KDA dia manana tombony betsaka toy ny fahatokisana avo, ny fiainana ela ary ny fiainana avo lenta.
PD series pump dia miitatra, multistage, pump centrifugal type mifanaraka amin'ny API610. Ny firafitry ny pump dia BB4 ny fenitra API610. KTD series pump dia horavana, multistage, double-casing pump. Ary ny anatiny dia rafitra sokajy.
Ny pompa andian-dahatsoratra AY dia natsangana ary nalaina miorina amin'ny voatavo karazany Y. Karazana vaovao vaovao arahana ny fangatahana fananganana maoderina. Izy io dia manana fahaiza-manao ambony kokoa ary paompy fiarovana amin'ny angovo izy io.
Ny paompy simika KCZ andiany paompy dia fiompiana tsimok'aretina haingam-bolo tokana, izay ny refy sy ny fampisehoana dia mifanaraka amin'ny fenitraDIN24256 / ISO5199 / GB / T5656. KCZ series pump pump process ary mifanaraka amin'ny ASME / ANSI B73.1M sy API610.